आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित » खबरहरुको एउटै केन्द्र
आईतवार, जेष्ठ ७, २०७४ ०८:११ मा प्रकाशित !
काठमाडौँ, जेठ ७ गते । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्रीे निवास बालुवाटारमा आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो । नीति तथा कार्यक्रम आज बेलुका नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेस गर्ने समेत मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: पुनः मतगणना सुरु गर्नेबारे छलफल
NEXT POST Next post: काँग्रेस कार्यकर्तामाथि आक्रमण
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते आईतवार, जेष्ठ ७, २०७४ ०८:११
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस आईतवार, जेष्ठ ७, २०७४ ०८:११
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण आईतवार, जेष्ठ ७, २०७४ ०८:११
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी आईतवार, जेष्ठ ७, २०७४ ०८:११
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? आईतवार, जेष्ठ ७, २०७४ ०८:११